Ganzabee Dibaabaa IAAF Diamond League mt 5000 magaalaa Osloo moo’atte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa IAAF Diamond League mt 5000 magaalaa Osloo moo’atte
Sinbiree Tafariifi Galatee Burqaanis 2ffaafi 4ffaa ta'uudhaan IAAF Diamond League Oslo 2015 xumuraniiru
Fiigicha meetira 5000 dubartoota jiddutti guyyaa har’aa Noorweey magaalaa Oslootti geggeeffameen atleetonni biyya keenyaa injifannoo guddaa argamsiisaniiru. Wolmorkii cimaa Diamond League isa Osloo kana, akkuma tilmaamamee turetti, atleet Ganzabee Dibaabaa turte kan moo’atte. Ganzabeen daqiiqaa 14:21:19n fiigicha mt 5000 kana kan xumurte. Akka eegamee ture rikoordii obboleettii isii, Xurunesh Dibaabaa,osoo hinfooyyessin hafte, garuu.
Previous articleGalii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan
Next articleLooziin jireenya fayya-qabeessaafis ta’ee umrii dheerinaaf tajaajila guddaa qabdi, jedhu qorattoonni